MPT Terms and Conditions – [CRBT Lucky Draw Program]
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the (“CRBT Lucky Draw Program”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanma Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you by Blue Planet Co., Ltd. (“BP”). By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
1.1 As mentioned above, the Promotion is fully operated by Blue Planet. The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing and subscription functions only, which will be further explained below.
Except as otherwise rightfully operated by Blue Planet or any other third party, as applicable, any MPT proprietary material related to the Promotion, including, without limitation, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of MPT and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to createalicense or right in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content accessible on the Promotion. Use of the Content for any purpose not expressly permitted by the Terms is strictly prohibited.
3.1 The Promotion period is from 21st Sept 2019 to 10th Oct 2019 (“Promotion Period”).
3.2 In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the [Caller Ring Back Tune (CRBT)] during the Promotion Period.
The Promotion may aggregate content obtained or provided by third parties, including Blue Planet Co., Ltd (“Third Party Content”). As such, MPT is not responsible for such Third Party Content or any linked websites associated with Third Party Content. Reference to any information, products or services of third parties does not constitute or imply endorsement, sponsorship or recommendation by MPT.
10. CRBT Lucky Draw Program Terms and Condition
1. Lucky Draw period for CRBT Service is for 20 days from 21st Sept 2019 to 10th Oct 2019 (“Promotion Period”).
2. MPT registered users (using an MPT SIM) who are Myanmar citizens, at least 18 years old, are eligible to join the Promotion.
3. To be eligible to win the prizes, users must subscribe and use the CRBT Lucky Draw Program during the Promotion Period.
4. To participate in the Promotion, users must subscribe to the CRBT service by sending SMS “buy xxxxxxx208” to “7979”. [The users who can participate by using Ring Tune code (the CRBT songs of Lay Phyu, Ah Nge, Myo Gyi, Y Wine) ending with 208 (xxxxxxx208)]
5. To register CRBT service and buy song code,
To register Monthly please send SMS REG M to 7979 (Subscription fee – 1050 MMK)
To register Daily please send SMS REG D to 7979 (Subscription fee – 47 MMK)
If user wants to buy song code, please send SMS “buy xxxxxxx208” to “7979” (song fee – 315MMK)
The subscription fee is inclusive of commercial tax.
6. Three (3) Winners will be selected randomly by using Ring Tune code (the CRBT songs of Lay Phyu, Ah Nge, Myo Gyi, Y Wine) ending with 208 (xxxxxxx208) at the end of the CRBT Lucky Draw Program Period. The prizes are (3) tickets of IRON CROSS Born To Rock Event.
7. To unsubscribe to the service, please send SMS “del xxxxxxx208” to “7979”.
8. Winners will be chosen via campaign management system of MPT randomly on 10th Oct 2019 and the winner will be contacted during office hours on the same day. The list of prize winners will be announced on Music Planet Official Facebook Page.
9. Blue Planet will call the eligible winner three times. If the winner does not answer within the three calls, Blue Planet will choose another participant as winner.
10. Any individual or organization working directly or indirectly with MPT and Blue Planet including their family and relatives are not eligible to participate the Promotion.
11. Blue Planet and MPT’s decision in relation to every aspect of the Promotion including but not limited to the type of Prize and the selection of winner shall be deemed final and conclusive under any circumstance. No further appeal, enquiry and/or correspondence will be entertained.
11. Use of the Prize(s)
11.1 All prizes are non-exchangeable, non-transferrable, non-assignable or not convertible to cash.
11.2 11.2 All confirmed winners must have national identification card, including but not limited to, all the necessary documentation.
12. Disqualification of winner
Blue Planet has the discretion to disqualifyaparticipant whom it suspects to be undertaking or in connection with any unusual or suspicious activities, without prior notice or without needing to give any reasons for doing so.
MPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - [CRBT Lucky Draw Program]
ဤစာမျက်နှာသည် (CRBT Lucky Draw Program) တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာ ရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ Promotionအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊“ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ Promotion ကို Blue Planet Co.,Ltd (Blue Planet) က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Promotionတွင်ပါဝင်ကံစမ်းခြင်းဖြင့်သင်သည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏ ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ”ဟုခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။
စည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်အခါမရွေး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပြီးနောက် Promotion တွင် သင်၏ဆက်လက်ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သော စည်းကမ်း ချက်များကို သင်က လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။၊
၁.၁ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Promotionကို Blue Planet က အပြည့်အဝ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Promotion တွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အတိုင်း အတာသည် အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Bill) နှင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁.၂ စည်းကမ်းချက်များတွင် သင်အား အတိအလင်း အပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့က သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူ များ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများက သီးသန့် ရယူထိန်း သိမ်းထားပါသည်။သင်အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ Promotionတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပြီး အခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ် ထားပါသည်။
၁.၃ MPTသည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်း ပြချက်မရှိဘဲသင်၏ Promotionသို့ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ပါဝင်ကံစမ်းမှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့်တာဝန်မရှိဘဲ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း၊ ယာယီသော်လည်းကောင်း ရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန်ငြင်း ပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါတွင်စည်းကမ်းချက်များသည် ဤတွင်ဖော်ပြထားသောဆက်လက်တည်ရှိနေမည့်စည်းကမ်းချက်များ ကို ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သော အတိုင်းအတာအထိ သင်အပေါ် ဆက်လက်စည်းနှောင်မှုရှိရမည်။
(Blue Planet) သို့မဟုတ် အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ အခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ Promotion နှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာ အပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) MPT ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် တစ်ခုခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဉာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများ အားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသောအကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်း ဖော်ပြ ထားသည်မှလွဲ၍ Promotion ၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများတစ်ခုခုတွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန် တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ Promotion တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော် သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ် ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်းခွင့်ပြုမထားသောမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆို အကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ Promotion ကာလသည် [၂၁.၉.၂၀၁၉] မှ [၁၀.၁၀.၂၀၁၉] အထိ ( "Promotion ကာလ") ဖြစ်ပါ သည်။
၃.၂ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် သင်အနေဖြင့် [ခေါ်သူနားဆင်တေးသံစဉ်ဝန်ဆောင်မှု]ကို Promotion ကာလအတွင်း စာရင်းပေးသုံးစွဲရမည်။
၄.၁ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုသူတွေထဲက အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူများ ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းတွေနဲ့အညီ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်နိုင်မှာပါ။
၄.၂ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ မပါဝင်နိုင်သူတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ MPT နှင့် Blue planet ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့မှ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာရှိများ နဲ့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ (အပါအဝင် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အတူ တကွနေထိုင်သူများ၊ သက်ဆိုင်နေသူများ)၊ သို့မဟုတ် MPT နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖြန့်ချိသူများ၊ ပေးအပ်သည့်ဆုကို ရောင်းချပေးသူများ၊ ကြော်ငြာနှင့် ပရိုမိုးရှင်း အေဂျင်စီများနှင့် ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပတ်သက်သမျှ လုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းဌာနများ၊ ထုတ်လုပ်ရေး ဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာန စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၇.၃ သင်အနေဖြင့် Promotion သို့ ဝင်ရောက်ကံစမ်းရာတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Promotion နှင့်ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အရဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့် သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားမဆိုရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုနှင့် အကျိုးဆက်များ တစ်ခုခုနှင့်အားလုံးမှ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ကိုထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေအား အသိပေးပြီးသည့်တိုင် Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းစဉ်အတွင်း သို့မဟုတ်ကံထူးဆုအား အသုံးပြုခံစားခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆိုထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ထိခိုက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု မကန့်သတ်လျက် ၎င်းတို့မှသော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသောနှင့် ၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြုသော တောင်းခံမှု များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများ၊ တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်းတို့မှ MPT အားကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ရာသက်ပန် လွတ်ငြိမ်းစေရန် သဘောတူညီပါသည်။
Promotion တွင် Blue Planet Co.,Ltd အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ("တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ")တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ် သော ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက် MPTတွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုခုအား ရည် ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ် အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
၉.၄ အကယ်၍ စည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် ၎င်းအကျုံးဝင်မှု၏ စည်းကမ်းများ ပဋိညာဉ်ပြုချက်၊ ပြဋ္ဌာန်း ချက်တစ်ခုခုအား တရားရုံးတစ်ခုခု သို့မဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအဖွဲ့တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ထို အကြောင်းအရာ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်မှ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ တရားမဝင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အာဏာမသက်ရောက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါက စည်းကမ်းချက်များ၏ ကျန်ရှိသော အပိုင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ စည်းကမ်းများ၊ ပဋိညာဉ်ပြုချက် သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏(တရားမဝင် ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိကြာင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှအပ) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးနှင့် သက်ဆိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိစေရဘဲ စည်းကမ်းချက်များ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်စီသည် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော အများဆုံး အတိုင်းအတာအထိ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး အာဏာ သက်ရောက်မှု ဆက်လက်ရှိရမည်။
၁၀။ CRBT Lucky Draw Program	အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်မျာ
၁၀.၁ Promotion ကာလသည် [၂၁.၉.၂၀၁၉] မှ [၁၀.၁၀.၂၀၁၉] အထိ ("Promotion ကာလ") ဖြစ်ပါ သည်။
၁၀.၂ MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုသူတွေထဲက အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူများ ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်နိုင်မှာပါ။
၁၀.၃ စတင်ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ CRBT Lucky Draw Program ကာလ နောက်ဆုံးနေ့အထိဝန်ဆောင်မှုရယူထားသောရက်များဖြစ်ပါက ကံထူးရှင်ဖြစ်ရန် အခွင့်အရေး ပိုများသည်။
၁၀.၄ ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန် "buy xxxxxxx208" ဟုရေးပြီး 7979 သို့ SMS ပို့ပေးပါ။ (လေးဖြူ၊ အငဲ၊ မျိုးကြီး၊ဝိုင်ဝိုင်းတို့ သီဆိုထားပြီး ကုဒ်နံပါတ် ၂၀၈ နှင့် ဆုံးသော ခေါ်သူနားဆင်တေးသံစဉ်ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများအားလုံး Promotion တွင်ပါဝင်နိုင်သည်။)
၁၀.၅ ဝန်ဆောင်မှုအား Register ပြုလုပ်ရန် နှင့် သီချင်းဝယ်ယူရန်
လစဉ်ဝန်ဆောင်မှုအား Register ပြုလုပ်ရန်အတွက် “REG M”ဟုရေးပြီး 7979 သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ( တစ်လလျှင် ၁၀၅၀ကျပ် (ကုန်သွယ်ခွန် ၅%ပါပြီး))
နေ့စဉ်ဝန်ဆောင်မှုအား Register ပြုလုပ်ရန်အတွက် “REG D”ဟုရေးပြီး 7979 သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ( တစ်ရက်လျှင် ၄၇ကျပ် (ကုန်သွယ်ခွန် ၅%ပါပြီး))
သီချင်းဝယ်ယူလိုပါက buy xxxxxxx208 ဟုရေးပြီး 7979 သို့ SMS ပေးပို့ပါ။
သီချင်းတပုဒ်ကို တစ်လလျှင် (၃၁၅) ကျပ် (ကုန်သွယ်ခွန် ၅%ပါပြီး)ကျသင့်ပါမည်။
လေးဖြူ၊ အငဲ၊ မျိုးကြီး၊ဝိုင်ဝိုင်းတို့ သီဆိုထားပြီး ကုဒ်နံပါတ် ၂၀၈ နှင့်ဆုံးသော ခေါ်သူနားဆင်တေးသံစဉ်ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားသော အသုံးပြုသူများထဲမှ (၃)ဦး ကို ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီး IRON CROSS Born To Rock ပွဲလက်မှတ်ကို ပေးသွားမှာပါ။
၁၀.၇ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်ရန် "del xxxxxxx208" ဟုရေးပြီး 7979 သို့ SMS ပို့ပေးပါ။
၁၀.၈ ကံထူးရှင်စာရင်းကို (၁၀.၁၀.၂၀၁၉) နေ့တွင်ရွေးချယ်ပြီး ကံထူးရှင်ကို ယင်းနေ့ ရုံးချိန်တွင် ကြေငြာပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကံထူးရှင်ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးပြီး Music Planet Official Facebook Page တွင်လည်း ကြေငြာပေးသွားပါမည်။
၁၀.၉ Blue Planet မှ အနိုင်ရရှိသူအား ၃ ကြိမ်တိတိဖုန်း ဆက်အကြောင်းကြားပြီး ဆက်သွယ် ၍မရပါက နောက်ထပ်တစ် ဦးအား	ရွေးချယ်သွားမည်။
၁၀.၁၀ MPT နှင့် Blue Planet ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့မှ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာရှိများ နဲ့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ (အပါအဝင် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အတူ တကွနေထိုင်သူများ၊ သက်ဆိုင်နေသူများ)၊ သို့မဟုတ် MPT နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖြန့်ချိသူများ၊ ပေးအပ်သည့်ဆုကို ရောင်းချပေးသူများ၊ ကြော်ငြာနှင့် ပရိုမိုးရှင်း အေဂျင်စီများနှင့် ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပတ်သက်သမျှ လုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းဌာနများ၊ ထုတ်လုပ်ရေး ဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာန စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀.၁၁ ကံထူးဆုအမျိုးအစားနှင့် ကံထူးရှင်ရွေးချယ်မှုအပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု ကန့် သတ်မထားသော ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်၏ ကိစ္စရပ်တိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ MPT နှင့် Blue Planet ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို နောက်ဆုံးနှင့် အပြီးသတ်ဖြစ်ရမည်။ ထပ်မံ၍မေတ္တာရပ်ခံခြင်း၊စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ခြင်းတို့အား လက်ခံဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။
၁၁။ ကံထူးဆု(များ) အသုံးပြုခံစားခြင်း
၁၁.၁ ကံထူးဆုများအားလုံးအား လဲလှယ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ငွေကြေးအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ပြုလုပ်၍မရပါ။
၁၁.၂ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သောကံထူးရှင်များအားလုံးတွင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအား လုံးအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သာဟုကန့်သတ်မထားသည့် အမျိုးသားမှတ် ပုံတင်ဒ်ပြားရှိရမည်။
၁၂။ ကံထူးရှင်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း
Blue Planet Co.,Ltd သည် ပါဝင်ကံစမ်းသူတစ်ဦးအား ကြိုတင်၍ အကြောင်းမကြားဘဲ သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုပေးရန်မလိုအပ်ဘဲ ပုံမှန် မဟုတ်သော သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခု ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း သံသယရှိပါက ထိုပါဝင်ကံစမ်းသူ အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
© Music Planet 2022. ALL RIGHTS RESERVED BY Blue Planet